BCH ooVimba-Funda ukurhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin Cash (BCH): Ukuhla kwe-BCH kunye nokuPhuka kweNkxaso ebalulekileyo kwi-546 yeedola, ngoMeyi unokuphinda ajonge i-470 yeedola
I-BCH ibuyela kwi-546 yeedola yenkxaso
I-BCH iqala ngokuthengisa uxinzelelo
Ixabiso langoku: $ 540.72
Intengo yeNtengiso: $ 11,351,900,862
Umthamo wokuThengisa: $ 1,206,222,641
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 700, $ 720, $ 740
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 250, $ 230, $ 210
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngo-Okthobha 4, 2021
I-Bitcoin Cash (BCH) kukuhamba phantsi. I-altcoin iwele kwizantsi layo elidlulileyo kwi- $ 470 kwaye yabuya umva. Ixabiso le-BCH laqhekeka ngaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21 kodwa lachaswa. Namhlanje, i-altcoin ibuyela emva njengoko amaxabiso eqhekeza ngaphantsi kweentsuku ezingama-21 ze-SMA. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo. I-altcoin iya kuwa kwaye iphinde ityelele indawo esezantsi kwi-470 yeedola.
BUkufunda kweZalathiso zeTekhnoloji zobuNkcitho
I-BCH ikwinqanaba lama-47 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-crypto ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-altcoin iyakwazi ukuwela kwicala eliphantsi. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwe-50-day SMA kodwa ngaphezulu kwe-21-day SMA. I-altcoin iya kuhamba ukuba la manqanaba aphuliwe. I-BCH ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ingqekembe izama ukunyuka inyuka njengoko amaxabiso efikelela kwi-bearish.
I-BCH ikukuhla ezantsi njengoko yehle isezantsi i- $ 546. Okwangoku, i-altcoin idibanisa ngaphezulu kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngo-Okthobha u-4 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH inokuthi iwele kodwa ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba lama- $ 537. I-BCH iya kubuyela umva kwi-78.6% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci apho iqale khona.
I-Bitcoin Cash (BCH) ikwiNdlela eseCaleni yokuHamba, ukuLa ubuso kwi-550 yeedola
I-BCH yaphula inqanaba le- $ 496 kwaye isusa ukunyuka okunyuka
I-BCH / USD idibanisa ngaphezulu kwe- $ 496
Ixabiso langoku: $ 499.55
Intengo yeNtengiso: $ 10,490,653,578
Umthamo wokuThengisa: $ 10,490,653,578
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngoSeptemba 27, 2021
I-Bitcoin Cash's (BCH) ixabiso litshintshile ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 470. Iibhere ziphinde zayiphinda kathathu inkxaso ye-BCH kodwa azikwazi kuyaphula. Kwakhona, ixabiso le-BCH sele lilungisile phezulu kodwa lajongana nokwaliwa kwi $ 550 ephezulu. I-altcoin ivalelwe kuluhlu phakathi kwe- $ 470 kunye ne- $ 550. Okwangoku, ngoSeptemba 21 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le- $ 374.74.
I-crypto ikwinqanaba lama-35 leNkqubela yamandla esiNxulumeneyo ixesha le-14. Le ngqekembe ikummandla weentlekele kwaye isondela kwi-oversold. Kwindawo ethengiswe kakhulu, abathengi banokuvela. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla. I-crypto ingaphezulu kwe-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa amandla okonyusa aphikisana nesenzo sexabiso.
I-BCH isezantsi. Iibhere ziye zaphula i-low yangaphambili kwaye zaqala phezulu. Ukulungiswa okuphezulu kujongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. Okwangoku, nge-22 kaSeptemba yedowntrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kuwa kwinqanaba le-1.272 ukongezwa kweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-455.50.
I-Bitcoin Cash (BCH) i-Slumps njengeebhere zokuzama ukuntywila kwi-BCH ukuya kwi-450 yeedola ephantsi
I-BCH yehla yaya kuthi ga kwi-530 yeedola esezantsi, bonisa iimpawu zokwehla okungaphezulu
Iithagethi ze-BCH / USD zangaphantsi kwe- $ 450
Ixabiso langoku: $ 548.88
Intengo yeNtengiso: $ 11,536,191,524
Umthamo wokuThengisa: $ 6,203,866,980
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngoSeptemba 20, 2021
Ixabiso leBitcoin Cash's (BCH) liwele ezantsi kwi-530 yeedola njengoko amaxabiso ekhefu engaphantsi kwemilinganiselo ehambayo. Oku kubonisa ukuba i-BCH inokuthi iqhubeke ukwehla kwicala elisezantsi. I-crypto iwile kodwa iphinda iphinde ibeke phantsi i-31 kaJulayi edlulileyo.
Ixabiso le-BCH lingaphantsi kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs ezibonisa ukuba i-crypto ikwisimo se-bearish. I-altcoin iyakwazi ukuwela kwicala elisezantsi. Kukwinqanaba lama-35 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ingqekembe ikwi-downtrend zone kwaye isondela kummandla ogqithileyo I-crypto ingaphantsi kwe-20% ye-stochastic yemihla ngemihla. I-BCH ifikelele kummandla ogqithileyo. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BCH ibikuludwe oluboshwe kwinqanaba leeveki ezimbini. Iibhere ziye zaphuka ngaphantsi kweedola ezingama-582 zangaphambili kwaye zaqala kwakhona ezantsi. Ngeli xesha, ngoSeptemba 7 yedowntrend, umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba leedola ezingama-448.68.
I-Bitcoin Cash (BCH) iyehla ukuya kwi-600 yeedola yenkxaso, iphinde ibuye kwi-Uptrend
I-BCH iphinda ibuye iphantsi kwi-600 yeedola
I-BCH / USD ifikelela kummandla ogqithileyo
Ixabiso langoku: $ 611.15
Intengo yeNtengiso: $ 12,885,114,310
Umthamo wokuThengisa: $ 6,135,845,664
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngoSeptemba 13, 2021
I-Bitcoin Cash's (BCH) Ixabiso libuyela ngaphezulu kwe- $ 600 njengoko ihlangana kwi $ 660 ephezulu. I-altcoin ngaphambili yayigxothwe kwi-660 yeedola njengoko yawela kwizantsi. Kwitshathi yemihla ngemihla, ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi komndilili oshukumayo, uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka. Kwangokunjalo, ukuba abathengisi baphula ngaphantsi kwe-600 yeedola yenkxaso, i-downtrend iya kuphinda iqale. I-BCH iya kuqhubeka iyehla iye kwi-550 yeedola ephantsi.
I-altcoin ikwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index period 14. Ibonisa ukuba i-crypto ikwindawo ye-downtrend kwaye inakho ukuwela kwicala elingaphantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zikhomba emantla zibonisa uptrend. I-crypto ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-BCH ikwisantya esonyukayo.
I-BCH iye yaphantsi. I-altcoin iwele kwizantsi elidlulileyo kwi- $ 600. Eli yayilelinqanaba lexabiso lembali ka-Agasti 27. Nge-27 ka-Agasti, inkxaso kwi-600 yeedola yabanjwa njengoko i-altcoin iqala kwakhona ukunyuka kwayo. Namhlanje, ukuba inkxaso efanayo ibambe, i-crypto iya kuphakama iye kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili.
I-Bitcoin Cash (BCH) ifikelela kuMmandla oThengisiweyo, eDowntrend ngokunokwenzeka
Ubuso beBCH buyala ukuphakama kwe- $ 804
I-BCH / USD ifikelela kwingingqi ethengiweyo
Ixabiso langoku: $ 768.10
Intengo yeNtengiso: $ 16,113,509,748
Umthamo wokuThengisa: $ 3,921,302,408
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngoSeptemba 6, 2021
NgoSeptemba 5, I-Bitcoin Cash (BCH) Yaqhekeka ngaphezulu kwe-715 yokuxhathisa kwaye yaxhaswa kwi-804 yeedola. I-altcoin inyukele kwingingqi ethengwe ngaphezulu kwintengiso. I-Bitcoin Cash inegumbi eliqingqiweyo kwi-rally njengoko i-crypto ifikelela kwingingqi ethengiweyo. Namhlanje, i-BCH iyawa njengoko ingqekembe ifikelela kwinqanaba eliphezulu lama- $ 804. Kwicala elisezantsi, i-altcoin inokubuyela kwinqanaba eliphantsi le- $ 740. Ukuhlaziywa kwakhona kunokuqhubeka kwakhona ukuba inkxaso engama-740 yeedola ibambe. Ngaphandle koko, uxinzelelo lokuthengisa luya kufikelela kwindawo ephantsi ye- $ 700 esezantsi. Imeko ye-bullish kukuba xa uptrend uqhubeka, intengiso iya kuhlangana ngaphezulu kwe- $ 905.35. Njengoko kubonisiwe sisixhobo seFibonacci. Nangona kunjalo, isenzo sexabiso sangoku siya kuqala ukusebenza.
I-altcoin ikwinqanaba lama-70 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba i-crypto ikummandla othengiweyo wentengiso. Ubukho babathengisi buya kutsalwa kwingingqi ethengiweyo. Okwangoku, ixabiso le-cryptos lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zikhomba emantla zibonisa uptrend.
I-BCH kukuhla okuye ezantsi. Kungenxa yokuba imakethi ifikelele kwingingqi ethengwe ngaphezulu. I-altcoin ijongene nokwaliwa kwi-804 ephezulu yeedola. Okwangoku, i-BCH iwele ezantsi kwi- $ 754 kwaye yabuya umva. Olunye ulwazelelo oluphantsi lunokwenzeka ukuba iibhere ziyaphula inkxaso yangoku kwi- $ 754.
I-Bitcoin Cash (BCH) kwi-Sideways Move, i-Faces Rejection kwi-715 yeedola
I-BCH ijolise phezulu kwi-804 yeedola
I-BCH / i-USD ijongene nokwaliwa okunamandla kwinqanaba le- $ 700
Ixabiso langoku: $ 648.50
Intengo yeNtengiso: $ 13,457,887,724
Umthamo wokuThengisa: $ 2,976,721,816
Utshintsho lwexabiso le-Bitcoin Cash (BCH) ngo-Agasti 30, 2021
I-Bitcoin Cash (BCH) iwile kwi $ 648.67 ephantsi. Ukusukela nge-16 ka-Agasti, i-BCH ibikulungiso olusezantsi emva kokuba i-uptrend igxunyekwe kwinqanaba le-715 yeedola. Abathengi baphinde bayiphinda imimandla yokuxhathisa kathathu kodwa abakwazanga ukwahlula ngaphezulu kokuphakamileyo. Izolo, i-BCH ibigxothwe njengoko i-altcoin yehle yaya kuthi ga kwi-641 yeedola. I-BCH iya kuthi rally ngaphezulu kwe- $ 800 ukuba abathengi boyisa ukunganyangeki kwe- $ 715. Namhlanje, i-BCH iwele kwinkxaso engaphezulu kwe-21-day SMA. Imakethi iya kuphinda inyukele phezulu ukuba inkxaso iyabamba.
I-altcoin ikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-crypto ikwi-trend trend zone kwaye ingaphezulu kwe-centerline 50. I-BCH ingaphezulu kwe-21-day SMA. Ikhefu elingezantsi kweentsuku ezingama-21 ze-SMA liya kubangela ukuba i-altcoin iqhubeke kwakhona nokuhla. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zikhomba emantla zibonisa uptrend.
Ukulandela ulwaphulo lwamva nje, i-BCH inokuthi iqhubeke kwakhona nokunyuka okuphezulu. Okwangoku, ngo-Agasti wama-29, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le- $ 804.21.
I-Bitcoin Cash (BCH) yehla phakathi kwamanqanaba e- $ 620 kunye ne- $ 715, i-Uptrend ngokunokwenzeka
BCH ijongene nokwaliwa kwi $ 715
I-BCH / USD ibanzi phakathi kwe- $ 620 kunye ne- $ 715
Ixabiso langoku: $ 671.51
Intengo yeNtengiso: $ 14,101,658,243
Umthamo wokuThengisa: $ 2,949,463,991
Utshintsho lwexabiso le-Bitcoin Cash (BCH) ngo-Agasti 16, 2021
Imali yokutshintsha Binance (BCH) Ihlanganisiwe yaya kuthi ga kwi-715 yeedola kodwa yaqala kwakhona ecaleni kwendlela. Kwiveki ephelileyo, abathengi khange bakwazi ukutyhala i-crypto ngaphezulu komgca wokumelana. Kwi-uptrend yokuqala, i-BCH yawela kwi-620 yeedola isezantsi emva kokwaliwa. Kwisiqendu sesibini, amaxabiso e-BCH ehla enyuka ezantsi kwendawo yokuchasana. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphuka ngaphezulu kokuchasana, i-BCH iya kuthi rally ngaphezulu kwe- $ 800 ephezulu. Nangona kunjalo, amacala ahamba ngezantsi kwenkcaso aya kuqhubeka ukuba inqanaba lokumelana lihlala lingaqhekeki. Okwangoku, ngo-Agasti 16 uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kweFibonacci 61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le- $ 836.29.
I-BCH ikwinqanaba lama-63 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-crypto ikwindawo ye-bullish mkhuba kwaye iyakwazi ukuhlanganisa ngaphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zikhomba emantla zibonisa uptrend. Ingqekembe ine-bullsh crossover njengoko iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphezulu kwe-50-day SMA. Oku kubonisa umqondiso wokuthenga.
Ukunyuka okuthe kratya kusenokwenzeka ukuba abathengi bazabalazela ukophula ngaphezulu komda wokumelana ne- $ 715. Okwangoku, ngo-Agasti 21 uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le- $ 777.22
I-Bitcoin Cash (BCH) iyancipha njengamaBhere aVavanya kwakhona iiLows zangaphambili
I-BCH idibene ukuya kwi- $ 710 ephezulu
Okwangoku, i-BCH iwele kwi-672 yeedola
Ixabiso langoku: $ 676.99
Intengo yeNtengiso: $ 14,214,893,198
Umthamo wokuThengisa: $ 2,713,833,042
I-Bitcoin Cash (BCH) Ixabiso lenza uthotho lweendawo eziphakamileyo kunye nokunyuka okuphezulu ngaphezulu kwe-21-day SMA. I-BCH iye yahlanganisana ukuya kuthi ga kwi-710 ephezulu yeedola kodwa abathengi bazama ukugcina ukomelela okungaphezulu kwelo liphezulu kutshanje kodwa abakwazi. I-BCH ibuyiselwe kwi- $ 682 emva koxinzelelo. Ukubuyiselwa kwakhona kuncedile njengoko iinkunzi zeenkomo zithenga idiphu. Kwicala elingaphezulu, ukuba amaxabiso aqhekeka ngaphezulu kwe-710 yokuxhathisa, intengiso iya kujongana ngaphezulu kwe- $ 770. I-BCH ifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso.
I-Bitcoin Cash ikwinqanaba lama-72 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba i-BCH ifikelele kwingingqi ethengiweyo. I-crypto inegumbi elinomda kwigumbi elingaphezulu. Okwangoku, ingaphezulu kwe-35% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iimarike zikwisantya esiphezulu.
I-Bitcoin Cash ikukunyuka okuphezulu emva kokubuyiselwa okuncinci. Ukuqhubela phambili kunokwenzeka. Ngeli xesha, ngo-Agasti 16 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye kwinqanaba le-680.64. Ukusuka kwisenzo sexabiso.
I-Bitcoin Cash (BCH) kwindlela esecaleni, iinzame zokuphula i-590 ephezulu yeedola
Ukuhlaziywa: 9 Agasti 2021
I-BCH ilwa nokuchasana nge- $ 590
I-crypto iphinde yaqala ukunyuka phezulu
Ixabiso langoku: $ 3,125.92
Intengo yeNtengiso: $ 366,516,306,020
Umthamo wokuThengisa: $ 30,727,758,990
Utshintsho lwexabiso le-Bitcoin Cash (BCH) ngo-Agasti 9, 2021
Ngo-Agasti 7, I-Bitcoin Cash (BCH) Bahlanganisana ukuya kwi- $ 590 kodwa abakwazanga ukuqhubeka nokunyuka. I-crypto iye yaxhathiswa kwinqanaba eliphezulu ngoku njengoko ibuyela kwi-549 yeedola. Namhlanje, i-BCH iqale kwakhona i-uptrend entsha yokuphinda iphonononge ephezulu yangaphambili. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukumelana ne- $ 590, i-crypto izakuya kwi-700 ephezulu yeedola. Kwelinye icala, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukophula amanqanaba asandula ukubakho, intengiso iya kuncipha ukuya kuluhlu olubophelelayo. Okwangoku, ixabiso le-BCH lidibanisa ngezantsi kwelona liphezulu kutshanje.
I-BCH ikwinqanaba lama-62 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-BCH ikummandla ophakamileyo ngaphezu kwe-50. Okwangoku, ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iimarike zikwisantya esiphezulu.
I-Bitcoin Cash ikwindlela esecaleni njengoko abathengi bezama ukwaphula oku kutsha nje. I-altcoin iya kuphinda inyukele phezulu ukuba uxhathiso lwe- $ 590 lwaphuliwe. Ngeli xesha, ngo-Agasti 7 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le- $ 698.72.
hayie: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali